एक मिनेटमा १० चोटिभन्दा बढी परेला झिम्काउनुहुन्छ ? त्यसोभए तपाईं बिरामी हुनुभयो
विशेषज्ञहरूका अनुसार, मानिसले एक मिनेटमा १० चोटि परेला झिम्काउँछ । तर तपाईंका परेला १० चोटिभन्दा बढी झिम्किए भने ब्लेफरोपाज्म नामक रोगको लक्षण हुनसक्छ ।
यो रोग लागेपछि परेला बारम्बार झिम्किरहन्छन् अनि पीडा हुन्छ । यसले गर्दा आँखाको मांसपेशी पनि खुम्चिन्छ । यसले त मानिसलाई अन्धो नै बनाउन सक्छ ।
ब्लेफरोस्पाज्मले एउटा वा दुवै आँखामा असर पर्छ । कहिलेकाहीँ यो समस्याले व्यक्तिको अनुहारको बनोट नै परिवर्तन हुन्छ तर उसको दृष्टिमा चाहिँ असर पर्दैन । तर पछि गएर यसले मांसपेशी, नसा, मस्तिष्क वा आँखालाई पनि गम्भीर रूपमा प्रभावित पार्छ ।
जन्मसँग सम्बन्धित : शिशुको मांसपेशीको विकासमा समस्या आउँदा माथिल्लो परेलामा ब्लेफरोस्पाज्म हुन्छ । परेला झिम्काउँदा बच्चालाई हेर्न समस्या भइरहेको छ भने तत्कालै सर्जरी गर्नुपर्छ नभए दृष्टि नै गुम्छ ।
वृद्धावस्थासँग सम्बन्धित : उमेर बढ्दै जाँदा ब्लेफरोस्पाज्म हुनु सामान्य छ । उमेर बढ्दा लिभेटर टिस्युले परेला उचाल्ने काममा अवरोध आउँछ । बूढो भएपछि दुवै आँखा प्रभावित हुन्छ ।
व्यायाम हो उपचार
यो रोग लाग्दा औषधिभन्दा आँखाको अभ्यास बढी प्रभावकारी हुन्छ ।
दाहिने हातको बूढी औंलालाई सीधा बनाएर अन्य औंलाले मुट्ठी बनाउनुस् । दाहिने हातलाई काँधको उचाइँसम्म सीधा अघिल्तिर उठाउनुस् । अब एकटक लगाएर बूढी औंलामा ध्यान केन्द्रित गर्नुस् । यो पाँचचोटि गर्नुस् ।
अब दाहिने हातलाई अघिल्तिरबाट हटाएर बिस्तारै दाहिनेतिर लानुस् । त्यसबेलामा दृष्टि पनि बूढी औंलामा केन्द्रित गरेर दाहिनेतर्फ लानुस् । अनुहारलाई स्थिर राखेर परेलालाई मात्र दाहिनेतिर लाने हो । यही क्रिया देब्रेतर्फ पनि गर्नुस् ।
अनुहारलाई अघिल्तिर स्थिर राखेर आँखाका नानीलाई सकेसम्म मास्तिर खिच्नुस् । आँखा पोल्न थालेर पानी निस्कने बेलामा माथिसम्म नानी खिचिरहनुस् । यो क्रिया तल्तिर, दायाँतिर र बायाँतिरबाट पनि गर्नुस् ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा ९७ प्रतिशत बिरामी असन्तुष्ट
जाडोमा ओठ फुटेर हैरान हुनुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी उपाय
त्रिविका विद्यार्थीले १ लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च प...
व्यवसायीले गुणस्तरीय काम गर्नुपर्छ : मन्त्री पोखरेल
यी हुन् धनुषा बम बिस्फोटमा पक्राउ परेका नेकपा प्रदेश संयोजकसहित ३ संदीग्ध
महिला मात्रै निस्किए भ्रमण वर्षको पैदलयात्रामा
उत्तरी धादिङमा भारी हिमपात